Chicago Car mgbazinye - Akwụkwọ na Carrentalchoice.com
Chicago Ozi mpaghara
Ndị nwere nnabata Irish - ma ọ bụ ndị na-enweta ihe ngọpụ ọ bụla maka ikpere ikpere - kwesịrị ịtụle ịga na Nlekọta 50th St Patrick n'ụbọchị na Chicago. Ntugharị a na March 12th ga-ahụ ìgwè ndị agha, ụgbọ mmiri na narị otu narị ụmụ amaala na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ndị na-abịa na-enwe obi ụtọ kwa afọ ezinụlọ. Ngha ahụ malitere na Balbo na Columbus n'ehihie, na-aga n'ebe ugwu nke Columbus Drive ruo na mmiri Buckingham. Otu n'ime akụkụ ndị ọzọ dị ịrịba ama nke ememe Chicago nke St Patrick's Day bụ ọdịnala nke ịwụnye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Chicago River. Na 1962, otu obodo na-ejikwa uwe na-egbuke egbuke na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ Stephen Bailey ka ọ gbanwee akwụkwọ ndụ mmiri maka St Patrick's Day. Mmiri na-acha akwụkwọ ndụ mmiri, ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ndị na-abịa abịa, ọbụna akwụkwọ ndụ biya na-enye! Ma iji hụ na Chicago n'ebube ya nile, na-aga ije n'obere obodo mgbe ọchịchịrị gasịrị ma hụ ọtụtụ narị ụlọ ndị jupụtara ìhè ọkụ, gụnyere Hancock Building na Sears Tower. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike ịdị na-eche banyere ọnụ ọgụgụ nke ememe Chicago, obodo ahụ nwere ọgaranya Irish nketa. Na-eto eto site na narị ole na ole ndị kwabatara na 1830s, Chicago toro ghọọ obodo anọ nke obodo Irish nke 1860 na-eme. Mana na afọ 50 ikpeazụ, ụbọchị Patrick St Patrick aghọwo ihe karịrị nnọọ ememme Irish, na ndị si n'ọdịbendị nile na-abanye na ememe ahụ. Ị nwere ike ghara ịnọ na Ireland, ma ọ bụ bụrụ Irish, ma tinye ọnụ ọchị ma jide Guinness elu, n'ihi na onye ọ bụla bụ Irish taa.
Oak Park Car Rentals (8mi), Bedford Park Car Rentals (11mi), Evanston Car Rentals (11mi), Skokie Car Rentals (12mi), Brookfield Car Rentals (12mi), Franklin Park Car Rentals (13mi)
Nzube anyị bụ ịchọta gị ọnụahịa kachasị ụgwọ maka Chicago Car mgbazinye. Anyị na-emeso nnukwu ụgbọ ala Chicago nnukwu ụgbọ ala, ya mere i nwere ike ijide n'aka na anyị ga-agbaso ụkpụrụ anyị, akwụ ụgwọ, nwetakwuo.